चटपटे खाँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! तपाईको ज्यानै जान सक्छ | Hulaki Online
2021 Feb 28, Sunday 05:51
चटपटे खाँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! तपाईको ज्यानै जान सक्छ
सास (टिप्स) । चटपटेको नाम सुन्दै तपार्इंको जिब्रो रसाउला । अमिलो, पिरो र नुनिलो स्वादको मिश्रण चटपटेका सौखिन अब होस गर्नुहोला । कागतिको अमिलो हालेपछि जिब्रो पड्काउँदै चटपटे खाँदै गरेका धेरै युवायुवती देख्न पाइन्छ । तर, त्यही जिब्रो रसाउने चटपटे खाँदा ज्यानै जान सक्ने तथ्य पत्ता लागेको छ ।
चटपटे पसलले कागतिको अमिलको सट्टा हाल्ने एसिडयुक्त अमिलोले मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको हो । कागतीको अमिलोको सट्टा मिसाइने भेनेगर नामक अमिलोले चटपटे खानेहरुमा गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ । बिहानदेखि बेलुकैसम्म चटपटे खान बालबालिकादेखि युवायुवतीको समेत लर्को लाग्छ । तर त्यही चटपटे तपार्इं हाम्रो स्वास्थ्यको शत्रु बनिरहेको पाइएको छ ।
भेनेगरको अमिलोका कारण आन्द्रामा घाउ हुन थालेपछि यसको असरबारे सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ । चिकित्सकको एक अध्ययनले चटपटेमा भेनेगर (एसिड) अमिलो हालेर खाँदाण आन्द्रामा विभिन्न घाउ हुन थालेको स्वास्थ्यकर्मीले पत्ता लगाएका छन् ।
जथाभावी खुलेका चटपटे पसलमा नछोपी राखेको खानेकुरा र भेनेगरको अमिलोले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउछ । भेनेगर मिसाएको चटपटे खाँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।